नेपालगन्ज म्याराथन : अन्य ८ विधाको दौडमा क-कसले जिते ? – Merokhushi
नेपालगन्ज म्याराथन : अन्य ८ विधाको दौडमा क-कसले जिते ?
मेरो खुसी । ४ मंसिर, २०७८ शनिबार १६:१८ मा प्रकाशित
नेपालगन्ज : नेपालगन्ज म्याराथन सातौं संस्करणको म्याराथन र हाफ म्याराथन बाहेक अन्य ८ विधाको दौड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ । १० किलोमिटर ओपन (पुरुष) मा मुकेश पाल प्रथम, तीर्थ पुन दोस्रो र सन्तोषनाथ योगी तेस्रो भए । उनीहरुले क्रमशः २५ हजार, १५ हजार र १० हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए ।
५ किलोमिटर ओपन (महिला) मा राजपुरा पछाई प्रथम, फूलमति राना दोस्रो र बन्दना बुढा तेस्रो भए । उनीहरुले क्रमशः १५ हजार, १० हजार र सात हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाए । ५ किलोमिटर (छात्र) मा बादल कार्की प्रथम, अतुल गोडिया दोस्रो र दीपेन्द्र बोहरा तेस्रो भएका छन् । उनीहरुले क्रमशः १० हजार, ७ हजार र ५ हजार रुपैया पुरस्कार पाएका छन् ।
३ किलोमिटर (छात्रा) मा सविता बुढा प्रथम, मन्जिता ऐडी दोस्रो र रविना शेष तेस्रो भएका छन् । उनीहरुले क्रमशः ७ हजार, ५ हजार र तीन हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन् ।
ह्वील चियरमा महेश चौधरी प्रथम, यज्ञबहादुर खत्री दोस्रो र चन्द्रबहादुर कामी तेस्रो भएका छन् । उनीहरुले सात हजार, ५ हजार र तीन हजार रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन् ।
किड्स रन (पुरुष) मा जश्मन्त शाही प्रथम, रोहित सुनार दोस्रो र शिशिर थापा तेस्रो भएका छन् । उनीहरुले पन्ध्र सय, एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ पाए । किड्स रन (महिला) मा जमुना पुन मगर प्रथम, समृद्धि बुढाक्षेत्री दोेस्रो र रुपा विष्ट तेस्रो भएका छन् । उनीहरुले पन्ध्र सय, एक हजार र पाँच सय रुपैयाँ पुरस्कार पाएका छन् । अन्य विधामा प्रथम, द्वितिय र तृतियका लागि नगद पुरस्कार राखिएको थियो । कर्पोरेट रनमा नवराज जोशी प्रथम, डा. पुष्कर न्यौपाने दोस्रो र विष्णुबहादुर रिमाल तेस्रो भएका छन् । उनीहरुलाई मेडलको मात्र व्यवस्था गरिएको थियो ।
नेपालगन्ज म्याराथन उद्घाटन गरेका युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराज, महानायक राजेश हमाल र प्रदेशसभा सदस्य कृष्णा केसी नमूना पनि वाकाथनमा सहभागी भएका थिए । नेपाली सेनाका पश्चिम कमाण्ड सेनापति उपरथी प्रेम शाही, नम्बर ४ बाहिनीपति सहायक रथी हरेन्द्र पाठक, भैरवप्रसाद गणका गणपति प्रमुख सेनानी जनमत कार्की, कृतिमानी धावक बैकुण्ठ मानन्धरसहित १९ जनाले २१ किलोमिटर दौडमा सामेल भएका थिए ।